Qiimaynta Ciyaartoyga Horyaalka Spain Ee LaLiga Oo La Shaaciyey, 9-ka Meelood Ee Laga Eegay Iyo Xiddigaha Wacdaraha Dhigay - Gool24.Net
Qiimaynta Ciyaartoyga Horyaalka Spain Ee LaLiga Oo La Shaaciyey, 9-ka Meelood Ee Laga Eegay Iyo Xiddigaha Wacdaraha Dhigay
Horyaalka waddanak Spain waxa la ciyaaray 27 kulan ka hor intii aan hakadka la gelinin horraantii bishan March, waxaana hoggaanka laba dhibcood ku haysay xilligaas Barcelona oo illaa haddana fasax kula maqan hoggaaminteeda.
Marka laga yimaaddo dhibcaha, hoggaanka tartanka gool-dhalinta waxa ku raaxaysanaya Lionel Messi oo sidoo kalena sameeyey caawinta ugu badan xili ciyaareedka.
Wargeyska AS ee kasoo baxa waddanka Spain, ayaa waxa uu soo saaray qiimaynta sagaal meelood oo waxqabadka xili ciyaareedka ee laacibiinta dhamaan kooxaha, sida goolasha, caawinta, difaaca, taakallada, badbaadinta goolka iyo xog kasta oo muhiim ah.
Ka sokow xaqiiqada ah in 11 ciyaarood ay ka hadhsan yihiin dhamaadka kulamada xili ciyaareedkan, Lionel Messi ayaa hoggaaminaya tartanka kabta dahabka ah ee LaLiga, waxaanu dhaliyey 19 gool, waxaanu shan gool ka sarreeyaa Karim Benzema oo kaalinta labaad ku jira.
Marka laga yimaaddo Messi iyo Benzema, waxa jira saddex ciyaartoy oo kale oo dhaliyey wax ka badan 10 gool, kuwaas oo kala ah Moreno (Villarreal), Lucas Pérez (Alavés) iyo Roger Martí (Levante).
Lionel Messi oo caawiyey 12 gool oo ay asxaabtiisu dhaliyeen xili icyaareedkan ayaa hoggaaminaya caawinta, waxaanu isu-geyn kusoo lug yeeshay 31 gool 22 ciyaarood oo uu u saftay Barcelona, iyadoo shanta kalena uu dhaawacyo ku maqnaa.
Xiddiga reer Argentine, waxa uu sameeyey 19 gool oo magaciisa ku qoran iyo 12 caawimood, taas oo tirada goolasha uu qaybta ka qaatay ka dhigaysa 31.
Waxa kaalinta labaad ku jira Portu oo u ciyaara Real Sociedad oo siddeed gool caawiyey, Luis Suarez oo Barcelona ah, Rodrigo oo Valencia ah iyo Roberto Torres oo Osasuna u ciyaara oo dhamaantood min toddoba gool caawiyey.
Khadka dhexe ee Real Madrid ee Casemiro oo udub dhexaad u ahaa guulihii Los Blancos ee xili ciyaareedyadii ugu dambeeyey, ayaa 53 jeer kubbado lala dhaafay ka daba yimid oo kasoo dilay ciyaartoydii goolkiisa kusoo waajahnay. Waxa ku xiga Unai Bustinza oo Leganes ka tirsan, Kiko Olivas oo Valladolid u ciyaara iyo Fernando Sevilla oo mind 48 kubbadood soo dilay.
Xogta kubbad-dhiibista waxa kaalinta ugu sarreeya ku jira halyeyga Barcelona ee Sergio Busquets oo bixiyey 1,871 baas, waxaana ku xiga Gerard Pique oo 1,857 kubbadood dhiibay.
Dani Parejo (1617), Toni Kroos (1608) and Ever Banega (1576) ayaa dhamaystiray shanta kaalmood ee ugu sarreeya.
Sida caadiga ah, difaacyahannada iyo laacibiinta dhexda ee daafaca ka horreeya ayaa lagu yaqaanaa inay qaladaadka ugu badan ku galaan ciyaartoyda kasoo horjeeda. Jaime Mata oo 67 qalad galay, kana tirsan kooxda Getafe ayaa kaalinta koowaad ee qaladka kusoo baxay.
Lionel Messi oo 118 xarfad uu sameeyey ku dhaafay laacibiin kasoo horjeedda ayaa ugu sarreeya, waxaana ku xiga Nabil Fekir oo Real Betis u ciyaara. Kaalmaha saddexaad, afraad iyo shanaad waxa ku kala jira Mikel Oyarzabal, Martin Odegaard iyo Lucas Ocampos.
Goolhayaha reer Spain ee Aitor Fernández ayaa hoggaaminaya badbaadinta ugu sarraysa ee horyaalka LaLiga, waxaanu goolkiisa ka diiday 126 kubbadood oo goolal noqon lahaa haddii aanu isagu joogin.
Goolhayahan oo tababaraha xulka qaranka Spain ee Luis Enrique ku cadaadinaya inuu ku daro xulka dalkaas, waxa kusoo xiga Manola Reina oo Real Mallorca u ciyaara oo 34 jir ah oo sameeyey 90 badbaadinood.
Ciyaartoyda ugu dheereeyey
Adrià Pedrosa ayaa noqday ciyaartoyga ugu dheereeya horyaalka LaLiga xili ciyaareedkan, waxaana kusoo xiga Fede Valverde oo Real Madrid ah. Laacibka hore ee Adrià Pedrosa oo u dheela Espanyol, waxa uu saacaddii ordaa 35.11km/h, halka uu Valverde saacaddii ordo 35.06 km/h, taas oo ka dhigan in 90-ka daqiiqadood ee ay ciyaaruhu socdaan aanay marna istaagin.
Hernani oo Levanta u ciyaara oo 35 km/h orday ayaa saddexaad ah, waxaana kaalmaha afraad, shanaad iyo lixaad ku ku kala jira Oscar Rodriquez oo 34.95km/h ah, Pau Torres oo 34.93 km/ orday iyo Marcos Llorente oo 34.9 km/h cararay.
Weeraryahanka Joselu oo ka tirsan Alaves ayaa ku guuleystay 217 kubbadood oo sare, waxaana ku xiga Raul Garcia oo Athletic Bilbao ka tirsan oo 151 kubbadood kaga guuleystay laacibiintii ay loollameen.